Ciyaartoy.com » Ciyaartoy Soomaaliyeed oo ku biiray kooxda kubadda cagta Wigan
Ciyaartoy Soomaaliyeed oo ku biiray kooxda kubadda cagta Wigan May 25, 2012 - ujawaab	Ciyaartoy Soomaaliyeed oo ku biiray kooxda kubadda cagta Wigan
Ciyaaryahankan Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Abuukar Axmed Sheegow ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda heerka koowaad ka cayaarta Premier League-ga ee Wigan Athletic,kadib marki uu kasoo qalin jabiyey iskuulka kooxda Wigan.
Ciyaaryahankan da’da yar ayaa la sheegay inuu heshiis la gaaray kooxda wigan,isagoo haatan si rasmi ah uga mid noqday cayaartoyda heerka koowaad ee kooxda,iyadoo ciyaaryahanka uu kursiga keyda ee Wigan marti ku noqon doono.
Waxaa la sheegay in ciyaaryahanka marki hore uu dhiiri gelin ka helay Garsoore Cabdulqaadir Caddaay oo la sheegay inuu geeyey iskuulka da’yarta ee kooxda Manchester City,xilligaas oo iskuulka horay u dhiganayey wiilkiisa Cabdisalaan Ibraahim,waxaana uu iskuulkaasi ku yaallaa xaafadda Mos side ee magaalada Manchester.
Abuukar Axmed Sheegow ayaa sanadki 2010-ka, ku biiray iskuulka kubadda cagta lagu barto ee kooxda Wigan,waxaana uu sanadkan ka mid noqday cayaartoyda iskuulkaasi ka qalin jabisay,isagoo sidaasna ku noqday inuu ka mid noqdo cayaartoyda waa weyn ee kooxda Wigan.
Aabaha dhalay ciyaaryahankan oo lagu magacaabo Axmed Bishaar Sheegow ayaa horay uga soo mid noqday cayaartoydi heerka koowaad ee Soomaaliya,isagoo u soo cayaaray kooxda Horseed.
Si kastaba laacibkan da’da yar ee Soomaaliyeed ayaa ku biiraya tirada lix cayaartoy Soomaaliyeed oo u cayaara kooxaha heerka koowaad ee qaaradda Yurub, kuwaasoo kala ah, Iidle Maxamed Cilmi, Ayuub Daa’uud, Cabdisalaan Cadaay, Ibraahim Faarax iyo Liibaan Cabdi.
Xigasho: Mustafa Xasan Cali
Calanka Sports Team
« PreviousBanaadir Telecom oo isku diyaarisay horyaalka	Next »Somali soccer league gets under way with Elman defeating Badbaado in the opening match	Leave a Reply